jeudi, 28 avril 2016 00:09
Toamasina : Tovolahy hanala bac tratra ambodiomby nangalatra akoho
Fahasahiana tsy roa aman-tany ny an’ity tovolahy iray, 19 taona, mpianatra amin’ny taona famaranana amina liseam-panjakana iray ao Toamasina, ka sahy nangalatra akoholahy iray goavana hitany tamin’ny lalana izorany hamonjy sekoly, androany alarobia maraina.
mercredi, 27 avril 2016 20:15
Sambava : Noravana ireo trano heva nanamorona ny RN5A
Nanomboka androany ny fandravana ireo trano hevan’ireo mpivarotra manamorona ny lalam-pirenena RN5A miazo ny seranam-piaramanidina, izay notanterahin’ny Kaominina ambonivohitra Sambava, nampian’ireo mpitandro filaminana mitambatra (Tafika-Zandary-Polisy).
mardi, 26 avril 2016 13:20
PM Mahafaly: Ekolazy hiditra minisitra
"Tsy fantatro na nisy na tsy nisy ny fanomezam-bola, satria tsy misy ny porofo" hoy ny lehiben'ny governemanta Olivier Mahafaly raha nanontanian'ny mpanao gazety izy momba ny filazana an-gazety fa nisy nandoa hatramin'ny miliara maro mba hitazonany ny sezany na hidirana minisitra.
lundi, 25 avril 2016 13:36
TOLIARA Mpivaro-tena nodorana telolahy
Rehefa tsy nety niray tamin’ny iray tamin’ireto telolahy efa samy mamomamo niara-nirevy taminy tao amin'ny toeram-pialam-boly iray ao Toliara ity mpivaro-tena iray nandeha fadim-bolana dia nanaovan’izy ireo herisetra teny an-dalana tamina toerana maizina sy mangina. Tezitra ity lehilahy iray ka nanondraka ny ambin-toaka teny an-tanany tamin’ny faritra manakaiky ny maha vehivavy an’ity koaitra ity, ary namelona “briquet” nandoro izany. Tsy vitan’izay fa mbola nodarohan’izy ireo ihany ity tovovavy zanaky ny alina, ka safotra tsy nahatsiaro tena ary lasa nitsoaka izy telolahy avy eo.
lundi, 25 avril 2016 13:27
Toliara: Antidahy 70 taona misoloky amin’ ny alalan’ ny varotra fiara
Rangahy lehibe iray efa mananika ny 70 taona, manao fitafiana mihaja sy maotina no voatonontonona fa manao fisolokiana sy fivadiham-pitokisana amin’ ny alalan’ ny varotra fiara tsara tarehy ao Toliara. Raha araka ny voalazan’ ny loharanom -baovao dia vola an-tapitrisa maro no efa azony tamin’ ireo lasibatra. Manana fiara iray tsara tarehy ity rangahy ity, ary asiany soratra hoe "Amidy" izy io, ka maro no roboka manontany.
vendredi, 22 avril 2016 20:28
Fanazavana ny toe-draharaha mafana tao amin'ny BC
Nitondra fanazavana mikasika ireo raharaha mafanafana eto amin'ny firenena ireo mpitandro ny filaminana eo anivon'ny Polisim-pirenena anio maraina tetsy amin'ny Brigade Criminel Anosy.
vendredi, 22 avril 2016 17:59
Raharaha biby manaikitra : Resaka fandotoana olona fotsiny
Manoloana ny resaka momba ny fisian'ny biby manaikitra izay mampatahotra ny mponina eny amin'ny fokotanin'Ambatobe, firaisana fahadimy eto Antananarivo Renivohitra, dia nanao fanadihadiana ny Solombavambahoaka Randrianarisoa Guy Rivo ahitana izay tena marina araky ny filazan'ny mponina eny an-toerana.
vendredi, 22 avril 2016 17:56
Sambava : Tovolahy kilasy “Terminale” mitarika fikambanan-jiolahy
Tovolahy iray mpianatra kilasy famaranana amin’ny sekoly tsy miankina iray ao Sambava tokony hiatrika fanadinana bakalôrea amin’ny faran’ny taom-pianarana 2015-2016 no lasa lehiben’ny jiolahy.
vendredi, 22 avril 2016 11:58
Anjiajia - Ambato Boeny : Ho afaka amin’ny fitokana-monina
Ho avy hisava lalana any amin'ny Kaominina Anjiajia distrikan'Ambato Boeny, amin'io herinandro ho avy io, ny kaoperativa mpitatitra KOFIFAM, iray amin'ireo mpanao ny zotra rezionaly any Mahajanga.
Tandremo sary mety mahatohina
jeudi, 21 avril 2016 19:59
Famonoana an'i Razaka: Efa herintaona tsy misy mangirana
Herintaona taty aoriana dia mbola tsy misy mazava ny famonoana feno habibiana satria, izay nitranga teny Ambohitrimanjaka, nahazo an'i RAHAJAMANANA Malalatiana Jacques na i Razaka ilay mpivaron’kena tetsy isotry.